मनसुनको पहिलो पन्ध्र दिन : गत वर्षभन्दा बढी मानवीय क्षति | Kendrabindu Nepal Online News
10946670 521999 4305753 6118918
१७ असार २०७७, बुधबार ०७:५५
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङमा मनसुन सक्रिय भएकै दिन गत जेठ ३१ गते घरमा पहिरो खस्दा दुई परिवारका नौ जनाले ज्यान गुमाए । ५४ घर रहेको बस्तीको बीचमा पहिरो खस्दा तीन घरगोठ बगाएको थियो भने अझै नौ घर उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उक्त अवधिमा गत वर्ष १५९ घटना भएकोमा यस वर्ष १४३ घटना भयो । घटना १६ ले कमी आए पनि मानवीय क्षति भने दोब्बर बढी अर्थात् गत वर्ष १४ जनाको मृत्यु भएकामा १७ बढेर यस वर्ष ३१ जनाले ज्यान गुमाए । पहिरोबाहेक यो अवधिमा चट्याङबाट १० र सर्पको टोकाइबाट तीन जनाको ज्यान गएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए ।
पछिल्लो १० वर्षको उक्त १५ दिनको तथ्याङ्क विष्लेषण गर्दा वि.सं. २०७० मा सबैभन्दा बढी बाढी, पहिरोका घटना भएको थियो । बाढीका ४९ र पहिरोका २३ घटना भएकोमा त्यस साल बाढीबाट ५२ र पहिरोबाट ३० गरी ८२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछि अहिले नै बढी मानवीय क्षति भएको छ । यस वर्ष मनसुन शुरु भएपछिको १५ दिनमा पहिरोका घटना बढी भयो ।
मौसमविद्का अनुसार मुलुकमा सामान्यत असार पहिलो साताबाट मनसुन सक्रिय हुन्छ । यसपालि एक हप्ता अघि नै जेठ ३० गतेबाट मनसुन सक्रिय भएको थियो । प्रिमनसुनकै समयमा पर्याप्त पानी पर्दा अहिले नदीनालाको सतहमाथि आइसकेको छ । उपत्यका लगायत विभिन्न शहरमा थुप्रिएको फोहर नदीले बगाएर लगिसकेको छ । सानो पानी पर्दा नै ठूलो क्षतिको जोखिम छ ।
मनसुनका बेला बाढी र पहिरोका घटना बढी हुन्छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उद्धारमा समस्या नहोस् भनेर यसपालि बेलैमा व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त पारिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कुन ठाउँमा उद्धार सामग्री कति छन्, कुन क्षेत्रमा कति डोजर, स्काभेटर र लोडर छ, राहत सामग्री र उद्धार सामग्री के के छ । कहाँकहाँ परिचालित गर्नुपर्छ भनेर सबै विवरण सङ्कलन गरी तयारीमा राखिएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न निकायसँग मिलेर असरमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली अवलम्बन गरी दैनिक विपद् बुलेटिनसमेत प्रकाशित गरेर समुदायलाई सुसूचित पार्दै आएको छ ।
यस वर्ष ३० लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमानका साथ आवश्यक तयारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिड–१९ को जोखिमका साथै विपद् पनि शुरु भएकाले तालमेल मिलाएर तयारी गर्नु पर्ने हुँदा आवश्यक व्यवस्थापनमा जुट्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मातहतका सबै निकायमा आवश्यक समन्वयका लागि निर्देशन दिइसकेका छन् ।
गृह मन्त्रालयको नेपाल विपद् प्रतिवेदन २०१९ का अनुसार मनसुनजन्य प्रकोपका कारण वार्षिक झण्डै एक हजारले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । विपद् जोखिम व्यवस्थापनविज्ञ डा कृष्ण देवकोटा कोभिड–१९ का कारण यसपटक विपद् व्यवस्थापनमा थप जोखिम र जटिलता रहेकाले त्यही अनुसारको तयारी आवश्यक रहेको सुझाव दिन्छन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा औसत पानी पर्ने अनुमान गरिसकेको छ । साउनमा थप बढ्न सक्ने अनुमान छ । विभागका अनुसार आगामी तीन दिन सबै प्रदेशमा सामान्य बदली हुने र केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश नं. १, वाग्मती प्रदेश, प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेकोे छ ।
मुलुकमा विपद् : १३ घटना, एकको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर १३ वटा मनसुनजन्य विपद्का घटना भएको छ । उक्त घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ । झण्डै १९ लाख बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।
उदयपुरस्थित एक घरमा जङ्गली हात्तीको आक्रमण भएको, नवलपरासी पश्चिममा वर्षाका कारण एक घर भत्किएको, पहिरोका कारण इलामको लप्सीबोटेस्थित एक घरमा क्षति पुगेको, म्याग्दीको बेनी नगरपालिकास्थित गलेश्वर नजिक घरमा आगलागी भएको प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गरी जनाएको छ ।
बाढी, पहिरो र वर्षाका कारण पछिल्लो चौबिस घण्टामा छिञ्चु–जाजरकोटा सडकखण्ड, कर्णाली राजमार्गस्थित दैलेख र दाङको केही सडकमा पहिरोले असर गरेको छ । विपद्का कारण झण्डै रु १९ लाख बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ । प्राधिकरणले मौसम सक्रिय रहेकाले सतर्कता अपनाउन भनेको छ । तर आज मुलुकका ठूला नदीमा पानीको बहाव सतर्कताको तहभन्दा तलै रहने अनुमान गरिएको छ ।रासस
थप क्षति हुन सक्ने अनुमान, मनसुनको पहिलो पन्ध्र दिन
Prevचार जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि दिक्तेल बजार अनिश्चितकालीन बन्द
नेकपामा चरम कलह : नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोपNext